३ पटकका गोल्डमेडलिस्ट न्युरो सर्जन डा बालकृष्ण थापाको निधन :: a1nepal.com.np
३ पटकका गोल्डमेडलिस्ट न्युरो सर्जन डा बालकृष्ण थापाको निधन
चितवन / युएस–बाङ्ला एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा वरिष्ठ न्युरो सर्जन बालकृष्ण थापाको निधन भएको छ। डा थापा भरतपुरको चौबिसकोठीमा रहेको चितवन अस्पताल प्रालि तथा बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा कार्यरत थिए। बंगलादेशमा भएको चिकित्सासम्बन्धी सेमिनारमा भाग लिएर नेपाल फर्कने क्रममा उनको विमान दुर्घटनामा परी मृत्यु भएको हो।
२०२४ माघ १४ गते कुसादेवी–३, काभ्रेमा जन्मिएका थापाले कुशादेवी उच्चमाविबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेका थिए। डा थापा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, महाराजगञ्जका गोल्ड मेडलिस्ट डाक्टर हुन्। २०५१ सालमा एमबिबिएस उत्तीर्ण भएका उनले चिकित्सा क्षेत्रमा अध्ययनका क्रममा ३ पटकसम्म स्वर्ण पदक प्राप्त गरेका छन्। थापाले बंगलादेशको ढाकामा रहेको बंगबन्धु शेख मुजिब चिकित्सा विश्वविद्यालयबाट न्युरो सर्जरीमा एमडी गरेका थिए। डा थापा थुप्रै देशमा पुगी विभिन्न शोध तथा अध्ययनमा सक्रिय थिए। न्युरो सर्जरीमा लामो समय योगदान गरेका कारण उनले देश-विदेशका धेरै पुरस्कार र सम्मान पाइसकेका छन्।
चिकित्सा पेशाका साथै साहित्यमा समेत सक्रिय थापाका ‘डाक्टरी कविता’ (२०६१), ‘डाक्टरका कविता’ (२०६९) कवितासंग्रह र ‘चिरफार’ (२०७०) निबन्धसंग्रह प्रकाशित छन्। यसका साथै उनले चिकित्सा क्षेत्रबारेको आफ्नो अध्ययन र शोधलाई समेटेर सन् २०१३ मा ‘न्युरो अंकोलोजी’ पुस्तक समेत निकालेका थिए।
समाजमा महिला हिंसासँगै बढ्यो पुरुष हिंसा पनि … करेला खाने सहि तरिका, यस्ता छन् ८ फाइदा क्याल्सियम किन आवश्यक छ ? जान्नैपर्ने कुरा सास फेर्न गार्हो हुन्छ वा दम छ? यसरी उपचार गर्न सकिन्छ प्युठान जिल्ला अस्पतालमा डिम्बाशयमा हुने जटिल खाले पानीको फोका(DERMATOID CYST) को अप्रेशन चुरोटको धूँवाभन्दा अगरबत्तीको धूँवा खतरनाक औंला काट्नेलाई थुनामा राख्न आदेश, छुटाउन पिडितकै हारगुहार एकताको प्रक्रियाबाट फर्किने पुल भत्किसक्यो : दाहाल आइएमइ र चन्द्रागिरीका मालिक चन्द्र ढकालसहित आधा दर्जन व्यापारी ‘राष्ट्रिय भ्रष्टाचारी’ घोषित ! किन हुन्छ डाक्टरमाथि बारम्बार आक्रमण ? (सरला कट्टेलको विशेष रिपोर्ट)
← एमबीबीएस सकेर नेपाल फर्किएका १५ जना विद्यार्थी पनि परे दुर्घटनामा ( नामावली सहित )	घुस लिने होइन दिने चाँही पक्राउ परे →